म्यान्मारमा सुरक्षाफौजको गोली लागि एकै दिन ३८ प्रदर्शनकारीको मृत्यु - नेपालबहस
म्यान्मारमा सुरक्षाफौजको गोली लागि एकै दिन ३८ प्रदर्शनकारीको मृत्यु
| ८:१७:१९ मा प्रकाशित
२ चैत, एजेन्सी । म्यान्मारमा सैन्य ‘कु’ विरूद्धको प्रदर्शनमा सहभागीमाथि सुरक्षाफौजले गोली चलाउँदा एकै दिन कम्तीमा ३८ जनाको मृत्यु भएको छ । आइतवार भएका प्रदर्शनमा सुरक्षा फौजले गोली चलाउँदा कम्तीमा ३८ जना प्रदर्शनकारीहरू मारिएको त्यहाँका अभियानकर्मीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।
आइतबारको यो घटना फेब्रुअरी १ मा सैन्य ‘कु’ भएयताकै सबैभन्दा घातक भएको एसिस्टेन्स एशोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स ‘एएपीपी’ले जनाएको छ । एएपीपीका अनुसार मुख्य शहर याङ्गुनको एउटा औद्योगिक क्षेत्रमा भएको झडपमा कम्तीमा २१ प्रदर्शनकारीहरू मारिएका छन् भने अन्यको देशका विभिन्न भागमा मृत्यु भएको छ ।
याङ्गुनमा प्रदर्शनकारीहरूले लाठी र छुरीको प्रयोग गरेपछि सुरक्षा फौजले गोली चलाएको दाबी गरिएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले एक औद्योगिक क्षेत्रमा चिनियाँ व्यवसायमाथि पनि हमला गरेका छन् । चीनले म्यान्मारको सेनालाई सहयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रदर्शनकारीहरूले चिनियाँ व्यवसायीमाथि हमला गरेका हुन् ।
बेइजिङले फलामे डन्डी, बन्चरो र पेट्रोल बोकेका मानिसहरूले १० वटा चिनियाँ कारखानामा आगो लगाइदिएको जनाएको छ । क्षति पुग्नेमा धेरैजसो लुगा उत्पादन गर्ने कम्पनी र तिनका भण्डारणहरू रहेको जनाइएको छ। एउटा चिनियाँ होटलमा समेत हमला भएको छ । चिनियाँ दूतावासले ‘केही उद्योगहरूमा लुटपाट गर्दै क्षति पुर्‍याइएको र चिनियाँ कामदारहरू घाइते हुनुका साथै त्यहाँ अड्किएको’ जनाएको छ ।
दूतावासले म्यान्मारमा रहेका चिनियाँ नागरिक एवम् सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न’ आग्रह गरेको छ । गत फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्ता हातमा लिएर एक वर्ष संकटकाल लगाए पनि म्यान्मारभरी सामूहिक प्रदर्शन जारी छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूले सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि नियन्त्रणमा लिइएकी नेत्री आङ सान सू चीसहित निर्वाचित सरकारका नेताहरूलाई रिहाइ र सैनिक शासनको अन्त्यको माग गरिरहेका छन् । गत नोभेम्बर महिनामा भएको चुनावमा धाँधली भएको भन्दै त्यहाँको सेनाले शक्ति हातमा लिएको हो । सो चुनावमा सू चीको दल न्याश्नल डेमोक्र्याटिक पार्टी बिजयी भएको थियो ।
म्यान्मार सैनिक कू : देशभित्र मात्रै हैन, विदेशमा पनि प्रदर्शन २ हप्ता पहिले
म्यान्मारमा आजदेखि थप जिल्लामा सैन्य कानुन लागु ४ हप्ता पहिले
म्यान्मारमा सेनाको गोली लागेर छ जनाको मृत्यु १ महिना पहिले
म्यान्मारका विदेशमन्त्री आसिएनका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी १ महिना पहिले
म्यान्मारमा सेनाले चलाएको गोली लागेर तीन प्रदर्शनकारीको मृत्यु २ महिना पहिले
वृद्ध सासुको सम्पत्ति लिएर हेरचाह नगर्ने सुष्माका श्रीमान रेग्मी पक्राउ ४८ मिनेट पहिले
चन्दननाथ मन्दिरको सुन्दरता नै हराउने गरी भवन निर्माण ९ घण्टा पहिले
आईपीएलमा मुम्बईमाथि बैंगलोरको जित ६ दिन पहिले
राष्ट्र प्रमुखबाट बाँडिएको बिभुषणमा चुच्चे नक्सा खै ?? ५ दिन पहिले
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भन्छन्, वाह्य दवावमा सांस्कृतिक अतिक्रमण भयो ४ दिन पहिले
नेपाल बङ्गलादेश बैंकको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, ९ दशमलव ९९ प्रतिशतमै घरकर्जा पाइने ? १४ घण्टा पहिले
ओलीले सत्ता कब्जा गर्न लागेको देउवाको आरोप ६ दिन पहिले
ललितकला प्रदर्शनीको तयारी अन्तिम चरणमा, ५९६ कलाकृति समावेश १ हप्ता पहिले
प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रको अन्त्य भएको छैन: प्रचण्ड २ हप्ता पहिले
इलाममा अनौठो रोगले एकैघरका चार जना बिरामी ४ हप्ता पहिले
सिगासमा भेट्टिएको फलाम खानीको उत्खनन शुरु २ हप्ता पहिले
नवर्निमित ब्यारेक भवनको आईजीपी ज्ञवालीद्धारा उद्घाटन ९ महिना पहिले
काठमाडौं, पोखरा र बुटवलमा तीन जना संक्रमितको मृत्यु ८ महिना पहिले